ကျွန်စနစ်၏အောက်ဘက် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ခါမှမပြောခဲ့သည့်အရာ - Afrikhepri Fondation
ကျွန်စနစ်၏အဓိကအချက် - မင်းတစ်ခါမှမပြောဖူးဘူး
DAvuke Duke ကဂျူးသမိုင်း ၀ င်များကိုကိုးကားခဲ့သည် အနောက်နိုင်ငံတွေမှာကျွန်စနစ်မှာဂျူးတွေရဲ့အဓိကအခန်းကဏ္။ အနည်းဆုံးရောမအချိန်ကတည်းကနှင့်ဖော်ပြသည် မီဒီယာဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှု ကျွန်ကုန်သွယ်မှု၌ဤကြီးစိုးအခန်းကဏ္ about နှင့်ပတ်သက်။ မိမိအဗျာဒိတ်တော်များနှင့်ပတ်သက်။ (အပိုင်း2: မီဒီယာဆင်ဆာ)
နယ်သာလန်ဂူယာနာရှိဂျူးပိုင်စိုက်ခင်း ၄၀ တွင်ကျွန် ၅၀၀၀ နေထိုင်သည်
တောင်အမေရိကရှိဂျူးအသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှငွေများကိုကျွန်စနစ်မှထုတ်ယူခဲ့ပြီးနောက်ဟော်လန်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဂျူးဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များက၎င်းကိုဂရုစိုက်သည်ဟုရဗ္ဗိလီဒီဗန်ဒီကမ်ကပြောကြားခဲ့သည်။ ဂျူးတယ်လီဂရပ်အေဂျင်စီ (JTA) ။ “ ဂျူးမဟုတ်သူတွေလည်းကြံရာပါ၊ ငါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်ကြံရာခံစားရတယ်။
van de Kamp, 65 နှစ်ပေါင်း, နယ်သာလန်အတွက်အကောင်းဆုံးလူသိများသြသဒေါက်ရဗ်ဗိကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။ သူဟာဒတ်ခ်ျဂျူးအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်တော်တော်များများစာအုပ်ရေးသားသူသည်နှင့်မီဒီယာအတွက်မကြာခဏပွဲစေသည်။
သူ၏နောက်စာအုပ်ဖြစ်သော“ ဂျူးကျေးကျွန်” အမည်ရှိသမိုင်း ၀ တ္ထုသည် ၁၈ ရာစုဂျူးကုန်သည်နှင့်သူ၏လူမည်းကျွန်တို့၏ခရီးကိုခြေရာခံ။ ဘရာဇီးမြောက်ပိုင်းရှိဒတ်ခ်ျစိုက်ခင်းများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ဂျူးများအားကျွန်ရောင်းဝယ်မှုတွင်ပါဝင်ရန်စည်းရုံးခဲ့သည်။ စာအုပ်အတွက်သုတေသနပြုနေစဉ်ဗန်ဒီကမ်သည်သူ့ကိုထိတ်လန့်စေသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအချို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အင်္ဂါနေ့ကအစ္စရေးသတင်းစာ Times of Israel တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သော JTA ဆောင်းပါးအရဗန်ဒီကမ်သည်ဒတ်ခ်ျဂီယာနာရှိဂျူးပိုင်စိုက်ခင်း ၄၀ တွင်ကျေးကျွန် ၅၀၀၀ နေထိုင်ခဲ့သည်ကိုသိရှိရသည်။ Jodensavanne သို့မဟုတ်ဂျူး Savannah ဟုလူသိများသောထိုဒေသသည် ၁၈၃၂ ခုနှစ်၌လူထုအုံကြွမှုတွင်မကျရောက်မီရာပေါင်းများစွာရှိသောဂျူးအသိုင်းအ ၀ ိုင်းပါဝင်ခဲ့သည်။ သူတို့အားလုံးနီးပါးသည်နယ်သာလန်သို့ပြောင်းရွှေ့လာကြပြီး၊ သူတို့စုဆောင်းခဲ့သောစည်းစိမ်ကို။
Pittsburgh တက္ကသိုလ်မှသမိုင်းပညာရှင် Seymour Drescher ၏အဆိုအရအနောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံCuraçaoတွင်ဒတ်ခ်ျဂျူးများသည်အနည်းဆုံးကျွန်ပေါင်း ၁၅၀၀၀ ကိုပြန်လည်ရောင်းချမှုတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည် တစ်ချိန်ကဂျူးလူမျိုးများသည်ဒတ်ခ်ျကိုလိုနီနယ်မြေများရှိကာရေဘီယံကုန်သွယ်မှု ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဂျူးများကထိန်းချုပ်ထားသည်။
ဂျူးလူမျိုးများသည်ကိုလိုနီနယ်မြေများတွင်သြဇာညောင်းသောကြောင့်ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုကိုဂျူးအားလပ်ရက်များ၌ရွှေ့ဆိုင်းလေ့ရှိကြောင်း William & Mary College မှဂျူးလေ့လာမှုပါမောက္ခ Marc Lee Raphael ကပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်မှာတော့ကျွန်ကုန်သွယ်မှုအတွက်ဂျူးအခန်းကဏ္ဍနီးပါးဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုများအတွက်သိပ္ပံနည်းကျဆွေးနွေးငြင်းခုံတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဟော်လန်မှာတော့, သို့သော်, ဂျူးကြံ၏မေးခွန်းကိုခဲ (ဆှေးနှေးအရင်းအမြစ်)
စာရေးသူ - အစ္စလာမ်ဘာသာ၏ The Nation
အလုပ်: လူမည်းများနှင့်ယုဒလူတို့ Volume ကိုအကြားလျှို့ဝှက်ဆက်ဆံရေးမျိုး 1
ခုနှစ် - ၁၉၉၁ ခုနှစ်
download link: The_Nation_of_Islam__Les_relations_secretes_entre_les_Noirs_et_les_juifs.zip
သတင်းရင်းမြစ်အကြောင်း။ အဓိကအားဖြင့်ဂျူးလူမျိုးအရင်းအမြစ်များမှဤစာအုပ်ထဲတွင်သတငျးအခကျြ။ အားထုတ်မှုယူဆသိပ္ပံနည်းကျဂျာနယ်များသို့မဟုတ်သမိုင်းဆိုင်ရာဂျူးထုတ်ဝေအိမ်များတွင်ထုတ်ဝေရန်သူအများဆုံးအသိအမှတ်ပြုဂျူးစာရေးဆရာများကို select လုပ်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဆန့်ကျင်ဆီးမိုက်သို့မဟုတ် Anti-ဂျူးစဉ်းစားစာရေးဆရာများမှလာနေသောကြောင့်ဤအရပ်၌ပေးအပ်သည့်သီအိုရီအားဖြည့်ကြောင်းအချက်အလက်များ၏စာရေးဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။
ကျွန်ကုန်သည်တွေသီးသန့်မွတ်စလင်သို့မဟုတ်အာရပ်မဟုတ်ကြပေမယ့် တခါတရံဘာဘာ, ပါရှနျ, Mizrahi ယုဒလူတို့အင်ဒီးယန်း, ဂျာဗား, မလေးသို့မဟုတ် Min Nan Chinese ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
အာဖရိကနိုင်ငံတို့တက်ကြွစွာအချို့သောစော်ဘွား Kanem-Bornu, အ Ouaddai သို့မဟုတ် Mahdiyah အဖြစ် Sahel အဓိကအားအရှေ့ရယူထားသောနေထိုင်ခဲ့ (ကွဲပြားဒီဂရီဤလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်1).
Timbuktu သည်ကျွန်များစုဆောင်းရောင်းချခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း၏ဗဟိုအချက်အချာကျသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးမူဆလင်များသာ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။ အနောက်တိုင်းရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ဘာသာရပ်ကို“ ကျွန်ရောင်းဝယ်မှု” ဟုခေါ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်“ မူဆလင်စာချုပ်” ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။2သို့မဟုတ်ပင် "barbaresque" ။
Al Andalus: လူဖြူများကိုကျွန်ပြုမှုအဖြစ်သို့လျှော့ချရန်ဂျူးနှင့်မွတ်စလင်မ်များအတူတကွစုရုံးပုံ
ဤအံ့သြဖွယ်အာရပ်ကျူးကျော်မှု (အေဒီ ၈ ရာစုတွင်) ဂျူးတို့၏စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးဖွယ်အခန်းကဏ္onကိုခဏခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားခြင်းသည်သင့်လျော်ပါသည်။.
အစ္စလာမ့် Andalusia ၏စိတ်နှလုံးမှာ, သူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်ရီးယန်းမတူဘဲဂျူးလွတ်မြောက်ခြင်းစိတ်အားတက်ကြွဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမြတ်လွတ်လပ်မှုကိုခံစားခြင်း, ဣဇာက်၏သား, ကုန်သွယ်ရေးအတွက်အကြီးတန်းလူထုအခြေပြုဝန်ဆောင်မှု, ဘဏ္ဍာရေး, စာပေထင်ရှားတဲ့အလုပ်အကိုင်များကျင်းပနှင့်စစ်တပ်၏ မှလွဲ. အားလုံးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်တာဝန်ရှိရာထူးရယူသုံးစွဲနိုင်ခဲ့ သောဣရှမေလသား [မွတ်စ်လင်] ၏ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။
သဘာဝအားဖြင့်ဘာသာပေါင်းစုံ, ယုဒလူလှည့်လည်ဟီဘရူး, ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကား, လက်တင်, ဂရိ, အာရဗစ်, တခါတရံဂျာမန်မျိုးကွဲများကိုထိမ်းသိမ်းမှတပါး, မိန့်မြွက်တော်မူ၏။ ဧကရာဇ်မင်း, စော်ဘွား, အားလုံး၎င်း၏ဧည့်သည်များနှင့်အတူ sycophant အားဖြင့်လက်ခံရရှိသံတမန်, ကြင်နာသောကြောင့်လောဘကုန်သည် Orient ၏ထက်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အိမျ၌ရှိသကဲ့သို့တစ်နေရာအရပ်ဖြစ်ခြင်း၏ရဲတင်းကျွမ်းကျင်မှုခဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာ။ လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူတဦးတည်းအနေဖြင့်အခြားမှဖြတ်သန်းတစ်ပွင့်လင်းရိပ်နှင့်တူသူတိတ်တဆိတ်လူကုန်ကူးမှု၏အမျိုးမျိုးသောပုံစံများအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ဘူး။
သူနဲ့ကြီးမားတဲ့ကံဇာတာကိုဆည်းဖူး။ တစ်ဦးကကုန်စည်သို့သော်အခြားသူများထက် ပို. ရွှေကိုဆောင်ခဲ့လေ၏။ ဗာဗုလုန်မြို့ဟောင်းသုံ့၏မြို့၏ကောင်းစွာသိရန်ထားရှိခဲ့ပါသည်။ ဤသည်ကိုကုန်သွယ်သူဖြစ်၏။ ဒါကြောင့်အချို့ဟေဗြဲကျွန်ခံအတွက်လူကုန်ကူးမှု၏ဤမြင့်မားအမြတ်အစွန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အထူးပြုဖြစ်လာခဲ့သည်။
« ဒါဟာအဓိကအား Almeria မှသူတို့ကိုတင်ပို့မတိုင်မီဂျူးကုန်သည် Verdun ထံမှ acheminaient နှင့် site ပေါ်တွင်သို့မဟုတ် Lucena ၏ Andalusian မြို့မှာမိန်းမစိုးသို့လှည့်ကြောင်းဥရောပကနေတင်သွင်းကျေးကျွန်အတွက်ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်သတင်းအချက်အလက်, ရှိပါတယ်။ » (Al Andalus 711-1492 - Pierre Guichard - စာမျက်နှာ ၁၄၆)
အစ္စလာမ့်ပင်လယ်ဓားပြတွေအထူးသဖြင့် Languedoc, Provence, Corsica, Sardinia, အီတလီ၏ကမ်းခြေတလျှောက်တွင်, အလှည့်၌, ခရစ်ယာန်မြေဆီလွှာ, တင်ပို့ရောင်းချမှုကျွန်အလုပ်အကိုင်ပေါ်စီးနင်းမှုကိုဦးဆောင်။
သူတို့ကသူတို့နောက်ကျော Andalusia နှင့်ထွန်းမှဆောင်ခဲ့သဖြင့်, ယောက်ျား, မိန်းမ, ကလေးတွေ, တစျခုလုံးကိုမိသားစုများနှစ်သက်သော။ အဲဒီမှာသူတို့ကပြည်တွင်းကျွန်ပြည့်တန်ဆာသို့မဟုတ်အစ္စလာမ်ဘာသာ၏အိမျတျောအမျိုးမျိုးသော Souk အပေါ်စစ်သားအဖြစ်, လက္ကားသို့မဟုတ်လက်လီသည်သူတို့ကိုမရောင်း။ အာရပ်ဟူသောစကားလုံးကျွန်တစ်ဦးပုံပျက်သောအရာ Saqalibas, ဤကံမကောင်းစွာတောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်အစ္စလာမ့် Andalusia ဖြစ်ခဲ့သည်။ စပိန်ကဒုတိယ-class ကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်သူတို့ရဲ့အနေအထားကိုအားဖြင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းပေမယ့်ဧကန်အမှန် brainless ခဲ့ကြသည်။ အဖြူရောင်ကျေးကျွန်, ဒါပေမယ့်လည်းအယူမှားခရစ်ယာန်တွေဟာစျေးကွက်နှင့်ထိတွေ့ခံရဖို့လေးပါးအဖွဲ့ဝင်များမှချည်နှောင်လမ်းများမှတဆင့်ဆွဲငင်ခဲ့ကြသည်။
ဒီပရဒိသုခုနှစ်တွင်ဆီးမိုက်အာရပ်နှင့်ယုဒလူတို့ဘဝကိုပျော်မွေ့ဖို့အံ့ဩဘွယ်သောတလျှောက်တယ်။ ဒါဟာ decidedly ဝေးစပိန်ကနေဒါဒဏ်ခံ, သုံးယောက်ဘာသာတရားကိုခေါ်အချို့သောကျွမ်းကျင်သူများကနေဆဲကျယ်လောင်စွာအိပ်မက်မက်ဝံ့ဖြစ်ပါတယ် ... တစ်ဦးကပင်သမားရိုးကျသည်ပညာကို reverse နိုင်ဘူး။ ခရစ်ယာန်ဥရောပတိုက်သားများစဉ်းစားပါ, မိမိတို့ကိုယ်ကို, ယုဒလူတို့မဟုတ်သလိုမွတ်စလင်များမကျွန်ခံရဖူးဘူး, တစ် docile ကျွန်သည်သို့လူတစ်ဦး emasculated ပါပြီဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
Roche မတ်လ - ချားလ်စ် Martel - Pardes ထုတ်ဝေရေး (2013)
မွတ်စ်လင် slavers, ခရစ်ယာန်, ဂျူးတွေ၏သားကောင်များ
အနောက်တိုင်းအပါအဝင်ကျွန်ခံဖို့လုံးဝမျက်နှာသာအာဏာချိန်ခွင်လျှာ, အားလုံးအဆင့်ဆင့်မှာတစ် Eurocentric သမိုင်းကြီးစိုးညီညွတ်သောဖို့ကျွန်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သူတို့၏ကျွန်များ၏သမိုင်းရှုထောင်၏နားလည်မှုနှင့်အနက်ကိုဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ သို့သော်အာဖရိကန်နှင့်အာဖရိကသားစဉ်မြေးဆက်, သမိုင်းအဖြစ်မှန်စနစ်တကျအနက် (မိမိဆန္ဒအလျောက်သို့မဟုတ်မ) ကသည်မုသာစကားပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်အမှားတစ်ခုစုဆောင်းခြင်းအားဖြင့် biased လျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုမြင်ကြဘဲလျက်, သူတို့ရဲ့သမိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်နှင့်မှန်ကန်သောနေကြတယ် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆန့်ကျင်ကဒီရာဇဝတ်မှုများအတွက်ပုံမှန်သို့မဟုတ်မျှတမှုမျက်နှာသာကြောင်းမမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု။
- Presentation Editor ကို -
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က Black Association မှအဖွဲ့ဝင်များသည်ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုနှင့်သူတို့၏ကျွန်စနစ်လျှော့ချခြင်း၏သမိုင်းနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်းရေးသားထားသောအလှူငွေတောင်းခံခဲ့သည်။ သူတို့၏ချဉ်းကပ်မှု၏အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြရန်ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသည့်စာအုပ်များပေါများသော်လည်း၊ စာဖတ်သူအားထုတ်လုပ်မှုတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ played မှပါဝင်ခဲ့ကြသောမတူကွဲပြားသောသရုပ်ဆောင်များကိုရှင်းလင်းပြတ်သားသောအမြင်အာရုံကိုပေးစွမ်းနိုင်သည့်အကျဉ်းချုပ်အလုပ်တစ်ခုမျှမရှိကြောင်းသူတို့ကထောက်ပြခဲ့သည်။ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆန့်ကျင်ဒီရာဇဝတ်မှု၏။ ကျွန်ပ်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်း၏အဓိကသရုပ်ဆောင်များကိုတာ ၀ န်ယူမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းကိုချဉ်းကပ်ပြီးတစ်ခုလုံးကိုလေ့လာမည့်ကျမ်းစာအုပ်ကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့သည်။ ကျွန်မကအရာရာတိုင်းကိုမဖတ်ရသေးဘူး၊ ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာစာအုပ်အတော်များများကိုစပိန်ဘာသာနဲ့ပြင်သစ်ဘာသာနဲ့တိုင်ပင်ပြီးအခက်အခဲမရှိဘဲအနည်းငယ် - အချို့ကိုပေါ်တူဂီဘာသာမှာအရှုံးပေးတယ်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ the မှပါဝင်ခဲ့သောသရုပ်ဆောင်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်သည်ကွဲလွဲနေဆဲဖြစ်သည်။
နောက်ပိုင်းမှာကွီဘက်မှာရှိတဲ့အာဖရိကန်ကျောင်းသားအုပ်စုတစ်စုကကျွန်တော့်ကိုချဉ်းကပ်ခဲ့တယ်။ သူတို့က“ အာဖရိကမီးလောင်တိုက်သွင်းခြင်း” ဟုခေါ်သည့်အရာနှင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်သမိုင်းကိုရယူရာတွင်အခက်အခဲများသင်ကြားပို့ချပေးသည့်စာတမ်းဖတ်ပွဲကိုသူတို့စီစဉ်ခဲ့ကြသည်။ အမှန်မှာ၊ သူတို့သည်မိမိကိုယ်ကိုမသိသောသမိုင်း၏သင်ကြားရေးတွင်ပါ ၀ င်ရန်အနည်းဆုံးပြောခြင်းသည်ပြproblemနာကိုရှာဖွေရန်မှန်ကန်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့အာဖရိကန်သားစဉ်မြေးဆက်များနှင့်အာဖရိကသားများကိုယ်တိုင်ကသူတို့၏သမိုင်းကိုလျစ်လျူရှုထားလေ့ရှိသည်။ ဒီအဝိဇ္ဇာသည်နှစ်ဆဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်ခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ လူဝီ Sala-Molins ကလူမည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ရှင်းလင်းစွာပြောကြားခဲ့သည်မှာ - " ကျနော်တို့ကသူတို့ဖြစ်လျက်ရှိနှင့်၎င်းတို့၏သမိုင်း၏လုယက်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းနည်းလမ်းပြောပြရန် » ။ ကသမိုင်းအဖြစ်မှန်စနစ်တကျတစ် buildup အားဖြင့် biased လျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုကြည့်ဖို့ဘယ်လောက်စိတ်ပျက်စရာပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ, ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်လွဲမှားစွာအနက်အားဖြင့်တည်ရှိသည်သို့မဟုတ်မ။
ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် 2001 ထုတ်ဝေပထမဦးဆုံးစာအုပ်ထဲတွင် White ကရက်စက်သော ကျွန်မအထူးသဖြင့်ဆာဟာရအာဖရိကနှင့်သူတို့၏သားစဉ်မြေးဆက်ဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင် non-အဖြူလူမျိုးဆန့်ကျင်, အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု၏ဥရောပခရစ်ယာန်သင်္ကေတ၏ကိုယ်စားအပေါ်အများအပြားရာဇဝတ်မှုများနှင့် 1492 ထံမှကျူးလွန်တောင်မှလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ "လေ့လာခွငျးအားဖွငျ့ အဖြူရောင်ခရစ်ယာန်အနက်ရောင်အာဖရိကန်လျော့နည်းစေသည့်ကျွန်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကျွန်စနစ် » ရာစုနှစ်အမေရိက၏ချွေးတပ်စခန်းအတွက်ငါကျွန်စနစ်၏လူမျိုးရေးနှင့်ဤအရပ်မှဒီရာဇဝတ်မှုများ၏ထူးခြားမှုမီးမောင်းထိုးပြ။ တကယ်တော့လူ့မျိုးစိတ်နှင်ထုတ်ခံရခြင်းနှင့်တရားဝင်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ရဲ့အစွန်းမှာစောင့်ရှောက်လျှင်, ရေးရာပြည်နယ်လျှော့ချကျွန် Black နဲ့ညံ့လို့အတူပြောရလျှင်ဖြစ်လာသည်။ ငါ ", အကြာတွင်ကြောင်းရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာပြသကြ Blanco-သမ္မာကျမ်းစာယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဥပဒေရေးရာအစီအစဉ်»  Non-ဥရောပလူမျိုးအပေါ်ချမှတ်ထား, ဖျက်ဆီးပါသညျဆက်လက်  ရလဒ်များကိုပျောက်ကွယ်သွားဖို့ငြင်းဆန်သောလူသတ်ဝါဒလို့ပဲ။ အခုတော့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာသိပ္ပံပညာရှင်များ19èmeရာစု, အလွှမ်းမိုးမှုကိုနှင့်ယုတ်ညံ့စဉ်းစားလူမျိုးပင်မျိုးဖြုတ်သုတ်သင်ရေးကိုအပြစ်လွတ်သူတို့ရဲ့အလုပ်အများဆုံးမြှုပ်နှံထားရရှိနိုင်မည်သူခရစ်ယာန်သာသနာပြုများဖြစ်ကြမတိုင်မီဆိုတဲ့အချက်ကိုလျစ်လျူရှု အဖြူကြီးစိုးဖြောင့်မတ်ပါဝင်သည်ဟုသာညစ်ပတ်အလုပ်။ အထူးသဖြင့်ကြှနျလူမျိုး၏ဝိညာဉျနှင့်အသိပညာဆိုင်ရာတင်သွင်းခဲ့တဲ့ခိုင်မာစေရန်။
သို့သော်၎င်းတို့၏ကံမကောင်းငှါ, အာဖရိကန်ကိုလည်းရာစုနှစ်ကအာရပ်မွတ်စလင်တိုက်ခိုက်မှုခံရခဲ့ရသည်။ ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် 2008 ထုတ်ဝေတစ်စက္ကန့်စာအုပ်ထဲတွင် လူဖြူ, လူမည်းဥပဒေကြမ်းများအတွက်ကူးသန်းရောင်း ထို့ကြောင့် ၇ ရာစုမှအာရပ်မွတ်စ်လင်မ်တို့၏ချဲ့ထွင်ရေးမူဝါဒ၌ကျွန်ပြုမှုအလေ့အကျင့်များကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ နှင့်ဤအခြေအနေတွင်7ရာစုတိုင်အောင်အာရပ် - မွတ်စလင်စီးပွားရေး၏အကျိုးအတွက်များအတွက်လူမည်းအာဖရိကန်၏ကျွန်ခံ။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှအာဖရိက၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်မွတ်စ်လင်မ်နိုင်ငံများသို့ကျွန်ပြုခံနေရသောကျေးကျွန်များဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှအခြေအနေဆိုးရွားလာခြင်းနှင့်လူမည်းအမျိုးသမီးများ၏ပုံသဏ္beganာန်စတင်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မေ့ထားကြသည်။ ထိုသိသိသာသာမသိရသောသမိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်သည်အထူးသဖြင့်မူဆလင်ဘာသာကိုလိုက်စားသောအာဖရိကန်များအပါအ ၀ င်မညီမညာဖြစ်နေသောအကြောင်းအရာဖြစ်လာသည်။ .
ဒါပေမယ့်အာဖရိကတိုက်သားကောင်တွေကိုအမျိုးမျိုးသော monotheistic ဘာသာတရားကျင့်ကိုဖိတ်ကြားထားရာတိုက်ကြီးဖြစ်ပါသည်, တစ်ခါတစ်ရံ, ခရစ်ယာန်နှင့်မွတ်စလင်ကျွန်မှတပါး, ယုဒလူတို့သည်ကုသလွန်း, အာဖရိကနှင့်အာဖရိကန် vampirized ။ ထိုသို့သုံး monotheistic ဘာသာတရားကျွန်စနစ်၏နိယာမထောက်ခံသည်ဟုစိတ်တွင်ဘွားမြင်ခြင်းကိုခံရမည်ဖြစ်သည်။ ယုဒလူတို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းနာဇီစကားတစ်ခွန်း၏သားကောင်များခဲ့ကြသည်ကတည်းကသို့သော်ထိုသို့ယုဒလူတို့အမေရိက၏ချွေးတပ်စခန်းမှအာဖရိကန်၏ပြည်နှင်ဒဏ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်, ဒါမှမဟုတ်ကြောင်းမူအရဖယ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်ဖြစ်စေ, ကျွန်ခံနေရာလူမျိုးရေး။ ပြင်သစ်တွင်, Black က Code ကိုပုဒ်မငါ 1685 အတွက်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည် America မှာအာဖရိကန်၏ကျွန်အတွက်ဂျူးလူမျိုးမဟုတ်သောပါဝင်မှု၏သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်ကြရပြီ။ ဒါနဲ့ရှိမရှိအပိုဒ် 1er အနက်ရောင်ကုဒ်၏မေးခွန်းကိုတားမြစ်ယုဒလူတို့သည်အကျိုးအမြတ်ကျွန်ကုန်သွယ်ရေးသိမ်းယူခဲ့သောမဆိုပါဝင်ပတ်သက်မှုလျှောက်ထားသို့မဟုတ်မနှင့်အဘယ်သို့ခဲ့ပါတယ်နှင့်ဆက်စပ်သောသုတေသနလုပ်ခဲ့တယ် ပေါ်တူဂီကိုလိုနီ, စပိနျ, ဒတျချြ, အင်္ဂလိပ်, ပြင်သစ် ... (ထို trilogy ပာ၏နောက်ဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည့်) ထို့ကွောငျ့ဒီတတိယစာအုပ်နှင့်စာဖတ်သူကိုပေးတော်မူမည်အကြောင်း, ကျွန်ကုန်သွယ်မှုအတွက်ကစားသမားတစ်ဦးမျှမျှတတပြည့်စုံအမြင်လိုအပ်ပါတယ် သူတို့ရဲ့အချက်ကိုဖကျြဆီးခွငျးအပေါင်းတို့နှင့်ဘာသာတရားမြား၏တာဝနျလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆန့်ကျင်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။
သို့သော်ငါသတိပြုရပေမည်၊ အမှန်မှာလက်တွေ့တွင်အမှန်တကယ်တွင်၊ လူမည်းလူဆိုးများ၏သားကောင်များ၏ရှည်လျားပြီးရှည်လျားသောအာဇာနည်သမိုင်းကိုမျက်နှာမ လိုက်၍ ချဉ်းကပ်ခြင်းသည်အန္တရာယ်များသောလုပ်ငန်းစဉ်၊ ရှုပ်ထွေးပြီး, ထို့အပြင်အတော်လေးကျေးဇူးကန်း။ လူမည်းတွေရဲ့လူကုန်ကူးမှုနဲ့သူတို့ရဲ့ကျွန်ဘဝကိုလျှော့ချတာဟာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ရေးသားသူကသာအငြိုးတကြီးနဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုကြောက်ရွံ့စရာမလိုပဲတာဝန်ရှိသူအချို့ကိုဖော်ပြလို့မရပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနယ်ပယ်မှာအမှန်တရားကိုစနစ်တကျရှောင်ဖယ်ထားလို့ဖြစ်လို့ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ချဉ်းကပ်နည်းဟာအချို့သောသားကောင်များအပါအ ၀ င်တွန့်ဆုတ်ခြင်းနှင့်ရန်လိုခြင်းများကိုနှိုးဆွပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီစိတ်ပျက်စရာအဖြစ်ကျွန်ကုန်သွယ်ရေး, လူအပေါင်းတို့သည်အနက်ရောင်သူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်ထုတ်ယူခဲ့သည်ဟုဆိုသည်သောသူတို့က၏ကျယ်ပြန့်ထိုးစစ်ထည့်သွင်းထားသည်။
ဒုတိယအပိုင်းမှာတော့လူမျိုးရေးသီအိုရီတွေနဲ့လူ့ဆက်ဆံရေးကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားတာတွေကိုလေ့လာခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကရှေးရှေးတုန်းကကျော်လွှားသင့်တဲ့လူမှုရေးနဲ့စိတ်ပညာဆိုင်ရာအမွေအနှစ်ပဲ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ နေ့စဉ်အဖြစ်မှန်တွင်ဤဖြစ်စဉ်သည်လူတို့၏စိတ်ကိုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေပြီးဒုတိယနှစ်ဝက်တွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သောလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဝါဒ၏မှတ်ဉာဏ်ကိုလှောင်ပြောင်လိုလျှင်ပင်ယဉ်ကျေးမှုရှုခင်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာသည့်လူမျိုးရေးခွဲခြားသည့်အပြုအမူကိုဆုံးဖြတ်သည် ၁၉ ရာစုနှင့် ၂၀ ရာစု၏ပထမရာစုမှဖြစ်သည်။ ရှင်းလင်းချက်အတွက်အလားတူစိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အခြားအာဖရိကန်သားများ၏အမဲလိုက်ခြင်းနှင့်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ကြသောအာဖရိကန်သားများ၏လိုက်လျောညီထွေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိသူများအားကျွန်ုပ်တုန့်ပြန်ခဲ့သည်။ အလွန်အမင်းလုံခြုံစိတ်ချရသောအခြေအနေနှင့်ပရမ်းပတာအခြေအနေများမည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်အချိန်၊ နိုင်ငံ (သို့) ဥရောပရှိလူ ဦး ရေ (အာဖရိကသို့မဟုတ်ဥရောပတွင်) ရှိပါသလဲ - စာဖတ်သူအားနားလည်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိတုံ့ပြန်သူများ၊ ။ ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်များကိုထောက်ခံရန်အတွက်အလားတူအခြေအနေမျိုးတွင်ဥရောပသားများ၏အပြုအမူကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အသုံးဝင်ပုံရသည်။
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအလုပ်နှင့်အတူငါတို့သည်ဗြောင်ကျကျ untruths ရှိနေသော်လည်းသို့သော်တရားဝင် uncontested ကျန်ရစ်သည့်မိန့်ခွန်းများကသယ်ဆောင်မုသာစကားနှင့်မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှုပြင်ပေးဖို့အလျှော့အလှူငွေပေး။ တစ်ခုကတော့ဂူစာအုပ်တစ်အုပ်အတွက်သရုပ်ပြအဖြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချဉ်းကပ်၏အားနည်းချက်များကိုသိရ  ကျွန်တော်တို့ဟာဥရောပကမ္ဘာကြီးကိုရန်သူ၏အတိတ်၏ဇာတ်လမ်းချမှတ်စာဖတ်ခြင်းအကြံပြု; ထိုသို့သင်ယူမှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအသိပညာများအားလုံးအဆင့်ဆင့်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
စစ်တပ်နှင့်နည်းပညာအရအနိုင်ရပြီးအောင်နိုင်ခဲ့သောဤဥရောပသည်အထူးသဖြင့်အနက်ရောင်အာဖရိကရှိပြည်သူတို့၏သမိုင်းကိုဗဟိုပြုသည့်ယူရိုငွေရေးကြေးရေးကိုရေးဆွဲခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီအောင်မြင်မှုဟာဥရောပသားတွေအတွက်ပဲဖြစ်သင့်တယ်၊ အဆိုပါအကြမ်းဖက်မှုနည်းလမ်းများနှင့်ဤယဉ်ကျေးမှု၌၎င်းတို့၏နှစ်မြှုပ်ခြင်းသူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှု» ။ အနောက်တိုင်းပညာရှင်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဤအကြမ်းဖက်မှုကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်စွာတရား ၀ င်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်တရားဝင်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉ ရာစုအစောပိုင်းက၎င်းတို့သည်သိပ္ပံဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအများစုကို၎င်းတို့အဆင့်နိမ့်သည်ဟုမှတ်ယူထားသောလူမျိုးများအားလွှမ်းမိုးရန်ထင်မြင်ယူဆသောသာလွန်သော“ လူမျိုးများ” ၏အခွင့်အရေးအပေါ်အခြေခံပြီးလူမျိုးရေးဆိုင်ရာပါရာဒိုင်းကိုဖော်ထုတ်ရန်မြှုပ်နှံခဲ့သည်။ စုပေါင်းဖြစ်လာသည့်ဤအယူအဆသည် ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်များတွင်ဂျာမနီတွင်နာဇီများအာဏာရလာသောအခါတွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်လူ့နှင့်လူမှုရေးသိပ္ပံများသည်ဤလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုကိုယ်စားပြုသောကြောင့်သူတို့၏တည်ဆောက်မှုသည်မည်မျှပြproblemနာရှိသည်ကိုသတိရစေခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်မှာကိုလိုနီနယ်ချဲ့သူများ၏သမိုင်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုသည်စိတ်ကိုဖျက်သိမ်းရန်ရည်ရွယ်သောအားထုတ်မှုကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်စွန့်စားရမှုမရှိသည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်မျှတ။ ကျန်းမာသောကြောင့်ဤချဉ်းကပ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။
ရို Amelia Plumelle-Uribe ကျွန်စနစ်၊ ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုနှင့်ကိုလိုနီလက်အောက်ခံများနှင့်ပတ်သက်သောကွန်ဖရင့်ပေါင်းများစွာတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ သူသည် La ferocity blanche ကိုရေးသားသူ၊ ၁၄၉၂ မှယနေ့အထိဖုံးကွယ်ထားသောလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ non-blancs aux non-Aryens ၏စာရေးသူဖြစ်သည်။ Albin Michel, 1492, Traite des Blancs၊ ဖြတ်, Anibwé, 2001 ။
 လူးဝစ် Sala-Moline, လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများနှင့်ဂျာနယ်အတွက်အဏု လိုင်းများ အမှတ် 3, ပဲရစ်, ဇွန်လ 1988 ။
 Plumelle-Uribe White ကရက်စက်သော။ Non-Aryan မှ non-လူဖြူ, ဝှက်ထားသောလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု 1492 ယနေ့ပဲရစ်, Albin မိုက်ကယ်, 2001 ။
 လူးဝစ် Sala-Moline, အဆိုပါအနက်ရောင်ကုဒ်သို့မဟုတ်ခါနာန်ကရာနီပဲရစ်, PUF, 1987, p ။ 21 ။
 sala-Moline, အဆိုပါအနက်ရောင်ကုဒ်, p.29 ။
 Plumelle-Uribe White ကရက်စက်သောcommoditization ၏အထူးသမျြးအခနျးကွီး9အကျိုးဆက်များ။
 Plumelle-Uribe အဖြူရောင်, အနက်ရောင်ဥပဒေကြမ်းများအတွက်ကူးသန်းရောင်း။ လူသိများရှုထောင့်နှင့်လက်ရှိအကျိုးဆက်များပဲရစ်, L'Harmattan, 2008 ။
 Plumelle-Uribe လူဖြူ, လူမည်းဥပဒေကြမ်းများအတွက်ကူးသန်းရောင်းအမျိုးသမီးများနှင့်မွတ်စ်လင်နိုင်ငံတွေ, p ကျွန်ခံအပါအဝငျ။ 47 ။
 ဂျက်တစ်ခုကတော့ဂူ, အဆိုပါလေယာဉ်ခရီးစဉ်သမိုင်း။ ဥရောပကမ္ဘာကြီးကိုရန်သူ၏အတိတ်၏ဇာတ်လမ်းချမှတ်ဘယ်လိုပဲရစ်: Gallimard, 2010 ။
 Noam Chomsky, ယခုနှစ် 501 ။ အဆိုပါသိမျးပိုကျဆက်ပြီးဘရပ်ဆဲလ်, EPO, 1994, p ။ 16 ။
SOURCE မှ: https://explicithistoire.wordpress.com/2014/12/14/les-dessous-de-lesclavage-2/
ကျွန် Atlas: ရှေးဟောင်းကနေပစ္စုပ္ပန်အထိ
€ 12 ကနေ 24,00 အသစ်
4 21,60 €ကနေအသုံးပြုခဲ့သည်
နောက်ဆုံးဇွန်လ 12, 2021 6:41 ရက်စွဲပါ
ဒosophနိကဗေဒ၏အခြေခံဥပဒေများ - Annie Besant (PDF)
subliminal ဂီတ (အသံ) Listen
ရည်ရွယ်ချက်၏စွမ်းအား - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (2015)